धानो – Deepshree Online
Home > साहित्य > कथा > धानो
गा.वि.स.भवनमा बिहानैदेखि पञ्चहरू भेला भएका थिए । धानोको विषयमा छलफल चल्दै थियो । धानोलाई के गर्ने ? गाउँ निकाला गर्ने कि नगर्ने ? एउटै स्वरमा सबैजना होमा हो मिलाउँदै भन्दै थिए, “धानो यो गाउँकी सबैभन्दा ठुली बोक्सी हो । धानोलाई गाउँमा राखियो भने यसले अरू महिलाहरूलाई पनि बोक्सीको जादु-टुना सिकाएर पारङ्गत बनाउँछे । यो गाउँमा यस्ता कैयौँ नयाँ बोक्सी उत्पादन हुनसक्छन् जसले गर्दा हाम्रो घरपरिवारलगायत मालताल पनि अझै असुरक्षित हुने सम्भावना छ । यसलाई चारपाटा कपाल मुडेर कालो मोसो दली गाउँ निकाला गर्नुमै हामी सबैको भलाइ छ । धानोको यत्रो हिम्मत कि प्रधानजी (गा.वि.स.अध्यक्ष)को छोरालाई नै जादु-टुना गरेर बिरामी बनाइदिने ।”
प्रधानजीका पाँचवटी छोरीपछिको एक्लो छोरो थियो पिन्टु । बडो मान-दान र धेरै देवीदेवताको भाकलपछि प्रधानजीले छोरा पाएका थिए । एक्लो छोरो निको नभएको देखेर प्रधानकी श्रीमती बडो बेचैन थिइन् । प्रधाननीजीले प्रधानजीलाई कर गरेर छिमेकी गाउँको झाँक्री बोलाउन लगाइन् । झाँक्री आफ्नो गाउने बजाउने समूहसँगै चार बजे नै प्रधानजीको घरमा आइपुग्यो । प्रधाननीजीले बिस्तारपूर्वक सबै कुरा झाँक्रीलाई भनिन् । झाँक्रीले प्रधाननीजीलाई विश्वास दिलायो कि जसरी भए पनि म हजुरको छोरालाई ठिक पारेरै छाड्छु । मैले कस्ता कस्ता नामी बोक्सीलाई तह लगाएको छु । उसको सबै गुण र जादु-टुना झिकेर पागलसम्म बनाइदिएको छु । मैले गाउँका कैयौँ भूतप्रेतलाई ब्रम्हस्थाननजिकैको पिपलको रुखमा किलाले ठोकेर बाँधी राखेको छु ।
सप्तमी तिथिको मध्यरातमा झाँक्री आफ्नो सहयोगीसँग मिलेर प्रधानजीको आँगनमा भगतै गाउन थाल्यो । ढोल मजिराको धूनसँगै भगतैको स्वर सुनेर टोलका मानिसहरू पनि प्रधानजीको आँगनमा जम्मा भए । धामीले पहिले विभिन्न देवीदेवता आफूमा समाविष्ट भएको कुरा बतायो । देवता चढेको भनेर है… ह्वी… गर्दै बेँत लिएर काम्न थाल्यो । आँगनमा जम्मा भएका सबै मानिसहरू आआफ्ना घरका इष्टदेवलाई नमस्कार गरेर स्मरण गरिरहेका थिए । धामीले भन्यो, “(है बाबु … एक सत … दोसर सत … तेसर सत … सत कारिक महराजके आगमन भऽगेल छौ । है … हैँ… हैँ…) मेरो जिउमा कारिक महाराज देउता प्रवेश गरेका छन् ।” प्रधाननीजीले दशै औँला जोडेर देउतालाई प्रणाम् गरी छोरा बिरामी हुनुको कारण सोधिन् । छोरालाई धानोले आफ्नो जादु-टुनाबाट बिरामी बनाएको कुरा झाँक्रीले प्रस्ट पारे अनि फेरि प्रधाननीजीले सोधिन्, “महराज, बिहान र बेलुकी गरेर १० किलो दुध दिने मेरो भैँसीलाई कसले मार्‍यो ?” झाँक्रीमा प्रविष्ट गरेको देउताले उत्तर दियो, “त्यही धानोले … ।”
धानोले तीन वर्षसम्म प्रधानजीको घरमा नोकर्नी भएर चुल्लोचौकाको काम गरेकी थिई । त्यस वेलामा प्रधानजीको घरआँगन बढार्ने, दरबजा सफा राख्ने, लिपपोत गर्ने, भाँडाकुँडा सफा गर्ने आदि सबै जिम्मा उसैको थियो । दुई हल गोरु, भैँसी, पाडा, पाडी, गाई, बाछो सबै मालजालको हेरचाह धानोले नै गर्ने गरेकी थिई । गाई र भैँसीको गोठको गोबर सोर्ने जिम्मा पनि उसकै थियो । धानोको एक स्वरमा गाई गोरु थर्कमान हुन्थे । बडो इमान्दारीसाथ काम गरेको देखेर प्रधानजीले उसलाई समय समयमा दैनिकी मजदुरीसँगै बक्सिसस्वरूप लुगाफाटो पनि दिने गरेका थिए ।
प्रधाननीजीले छोरा पाएको वेलामा पनि उनलाई धानोले खुब सेवा गरेकी थिई । सोइरी (प्रसूति गृह)मा गएर पानी तताएर दिने, समयमा खाना खुवाउने अनि बच्चालाई तेल मालिस गर्ने जिम्मा पनि धानोले निर्वाह गरेकी थिई । घरका सबै सदस्यहरूलाई बिहानको चिया अनि गहुँको पिठोको सोहारी (पातलो रोटी) र आलुको भुजिया खाजामा पकाएर दिने जिम्मा पनि धानोले नै सम्हालेकी थिई । धानोको हातको खाना खाएर प्रधानजीलगायत घरका सबै सदस्यहरू दङ्ग पर्ने गर्थे । खेतमा काम गर्ने जन (मजदुर)हरू पनि उसको हातको खाना खाएर मख्ख पर्ने गर्थे । सबैले भन्ने गर्थे, “वाह ! खाना होस् त धानोले पकाएको जस्तो … ।”
धानोको बालविवाह भएको थियो । सानैमा आमाबुबाले धानोको विवाह रमदौवासँग गरिदिएका थिए । रमदौवा गरिब भए पनि श्रीमतीलाई खुब माया गर्थ्यो । दिनभरि जन-मजदुरी गरेर ल्याएको रुपैयाँ-पैसा श्रीमतीलाई नै राख्न दिने गर्थ्यो । श्रीमान्ले ल्याएको पैसालाई बडो जतनसाथ आफ्नो टिनको बाकसमा सात तह कपडामा बेरेर धानोले राख्ने गर्थी । धानो समय समयमा आफ्नो श्रीमान्लाई भन्ने गर्थी, “खर्चाको लागि पुरानो नोट ल्याए पनि हुन्छ तर बाकसमा जम्मा गर्नलाई नयाँ नोट नै लिएर आउनू ।” रमदौवाले हाँसेर उत्तर दिन्थ्यो, “हुन्छ धानो, म तिम्रोलागि बजारबाट साटेर भए पनि नयाँ नोट लिएर आउँछु ।”
रमदौवा बिस्तारै काम सिक्दै लेबरबाट एक नम्बरको राजमिस्त्री भइसकेको थियो । ऊ आफ्नो कामप्रतिको लगन, इमान्दारिता र मिहिनेतले प्रगतिको बाटोमा उँभो लाग्न थालेको थियो । रमदौवा बिस्तारै घर बनाउनको लागि छिमेकी गाउँमा पनि जान थाल्यो । उसको साथीभाइको सङ्गत पनि बढ्न थाल्यो । साथीभाइको सङ्गतले रमदौवा जाँड-रक्सीको कुलतमा फस्दै गयो । यो कुरा धानोलाई पटक्कै मन परेको थिएन । यत्ति जाँड खाएर राति ढिलो किन आउनुहुन्छ ? भनेर धानोले सोद्धा रमदौवा हल्लिँदै उत्तर दिन्थ्यो, “हेर धानो, दिनभरि काम गर्दा गर्दा थकित भएको हुन्छु । थकाइ मार्नलाई एक-दुई गिलास पिउने गर्छु ।” जाँड नपिउनू भनेर धानोले सम्झाउँदा उल्टै रमदौवा ऊमाथि खनिन्थ्यो ।
एक दिन कामबाट फर्किरहेको वेलामा रमदौवा र लेबरहरू भट्टीमा पसे । भट्टीमा ताजा रहु माछा तार्दै थियो । एक एक बित्ताको रहु माछामा रातो मसालाको समिश्रण लेप देखेर रमदौवाहरू आधा किलो माछा, एक किलो चिउरा, चार बोतल लोकल रक्सी र खाली गिलास लिएर सुकुलमा बसिहाले । सबैजना खान र पिउनमा मस्त भए । रमदौवाले अरू लेबरहरूलाई कुरैकुरामा भन्यो, “बिचरा सोधना ! आजै उसलाई ज्वरो आउनुपर्ने ।” अर्को लेबर उदगारले प्रतिउत्तरमा ग्लासमा रक्सी थप्दै भन्यो, “उसको भाग्यमा पनि त लेखेको हुनुपर्‍यो नि यो रहु माछा र यो स्पेसल दारु ।” फिटान भएर पिएपछि सबैजना हल्लिँदै बाटोमा अल्हाउदल लोकनाचको गीत गाउँदै आआफ्ना घर पुगे ।
घरमा पुगेको आधा घण्टापश्चात् रमदौवा वान्ता गर्नथाल्यो । धानोले बढी मात लागेको होला भनेर श्रीमान्को टाउकोमा पानी खन्याएर आँपको अचार खुवाई । रमदौवा नसामा झुम्म भएकोले राति खाना नै नखाई सुत्यो । उसको सुत्ने वेलामा घुर्ने बानी थियो । उसको घुराइ बिस्तारै कम हुँदै गएको देखेर धानोलाई शङ्का लाग्यो । धानोले श्रीमान्को नाडी छामी । रमदौवाको नाडी मन्द गतिमा चल्दै थियो । धानो जोड जोडले चिच्याउन थाली । टोलका सबै महिला-पुरुषहरू रमदौवाको आँगनमा जम्मा भए । धानोको देवर भोलाले गाउँको डाक्टरलाई बोलाएर ल्यायो । गाउँको डाक्टरले अत्यधिक दारु सेवनको कारण रमदौवाको अवस्था नाजुक भएको भन्दै उपचार सुरु गर्‍यो ।
लोकल दारु बनाउने वेलामा सडेको महुवामा भात र अन्य रसायनसँगै खेतमा छर्ने युरिया मलको मात्रा अत्यधिक भएकोले दारु जहरमा परिणत भएको थियो । त्यस साँझ त्यो भट्टीमा दारु पिउनेजति सबै बिरामी परेका थिए । दारु पिउनेजति सबै बिरामी परेको खबर थाहा पाउनेबित्तिकै भट्टीसाहु रातारात भट्टी छोडेर टाप कसेको थियो । अन्ततः अत्यधिक दारु सेवनका कारण ओल्लो गाउँ र पल्लो गाउँ गरेर जम्मा एघार जना मृत्युको मुखमा पुगेका थिए । त्यसमा रमदौवा पनि परेको थियो ।
सामाजिक शुभकार्य र सामूहिक पूजापाठमा समाजद्वारा वञ्चित विधवा र बेसहारा धानोको कुनै सन्तान पनि थिएन । धानोले मजदुरीबाट जम्मा पारेको रकम र ऊसँग सम्पत्तिको नाउँमा भएको दुई कट्ठा खेतलाई कृषि विकास बैङ्कमा राखेर लिएको लोनबाट एउटा भैँसी किनेकी थिई । त्यहीँ भैँसीको दुध बेचेर ऊ आफ्नो गुजारा चलाइरहेकी थिई । धानोको भैँसीको दुध पूरै गाउँमा प्रशिद्ध थियो । ऊ अलि महँगो भाउमा पानी नमिसाएको शुद्ध दुध बेच्ने गर्थी । आफ्नो परिश्रम र इमान्दारिताको कमाइले धानोले एक वर्षमै कृषि विकास बैङ्कको कर्जा चुक्ता गरेर केही नाफा पनि आर्जन गरिसकेकी थिई ।
धानोलाई उसको घरबाट गा.वि.स.की पियन सोनफी र गाउँका केही मानिसहरूले घिसार्दै पञ्चैतीमा ल्याए । ऊ दश औँला जोडेर पञ्चहरूको सामुन्ने थरथर काम्दै उभिएकी थिई । ऊ भक्कानो छोडेर रुँदै, कराउँदै सफाइमा केही भन्न चाहिरहेकी थिई तर त्यहाँ कोही पनि उसको बोली सुन्नलाई तयार थिएन । झगरु नेताले रिसाउँदै धानोलाई भन्यो, “तिमी आफ्नो सबै दूत-भूतलाई यो झाँक्रीको अगाडि प्रकट गर नत्र तिम्रो आज खैरियत छैन । तिमीले गर्दा यो टोलमा उत्पात नै मच्चियो । बुधनाकी बुहारीको दुई महिनाको गर्भ तिमीले नै आफ्नो जादुबाट तुहायौ । मोहनाको बाख्रा पनि तिमीले नै मारेको हो । हँ ! कहाँबाट तिमी यस्तो पक्का जादु-टुना सिकेर आयौ धानो ?”
धानोले थरथर काम्दै पहिलोपटक प्रधानजीको आँखामा आँखा जुधाउँदै भनी, “प्रधानजी, म हजुरको घरमा त्यतिका दिन काम गरेँ । आफ्नै हातले बच्चा र प्रधाननीजीको सेवा गरेँ । म कसरी यस्तो काम गर्नसक्छु ! मलाई जादुको “ज” अक्षर पनि थाहा छैन । मैले हजुरको नुन खाएकी छु प्रधानजी । मेरो बिन्ती छ हजुरलाई । यस्तो आरोप म गरिब एकल महिलामाथि नलगाउनू । म बोक्सी होइन प्रधानजी । म निर्दोष छु ।” प्रधानजी चुपचाप धानोको सबै कुरा सुनिराखे तर एक शब्द पनि आफ्नो मुखबाट निकालेनन् । पञ्चैतीमा जम्मा भएका पञ्चहरूमध्येबाट झगरु नेताले सोनफी पियनलाई धानोको कपाल काट्नलाई आदेश दियो । धानो पटक पटक नेताहरूसँग आफ्नो रिहाइको भिख माग्दै थिई तर …. । सोनफीले कैँचीले धानोको कपाल काट्न थाल्यो । सयौँ गाउँलेहरूका बिचमा विधवा धानोमाथि अपमानको ताण्डव सुरु भयो । गाउँका अरू महिलाहरू पनि परबाट पञ्चायतले गरेको फैसला हेर्दै र सुन्दै थिए तर ठुलो अन्धविश्वासको जरा गाडिएको समाजमा बोक्सीप्रथाको विरुद्धमा बोल्ने आँट कसैले गरेनन् !
सोधनालाई आफ्नै आँखाअगाडि धानोको कपाल काट्दै गरेको देखेर उसलाई असैह्य भयो । धानोको रुवाइले उसको अन्तरआत्मालाई धिक्कार्‍यो । सोधनाले मनमनै सोच्यो, “आज रमदौवा ठेकेदार जीवित भएको भए धानोमाथि यस्तो अन्याय हुँदैनथ्यो होला । ठेकेकारले सधैँ हामीलाई आफ्नै पैसाले जाँड ख्वाउँथ्यो । कहिलेकाहीँ परेको वेलामा पैसा पनि त सापटी दिन्थ्यो । जीवित छँदा ठेकेदारले मलाई ख्वाएको दारुको कसम, म धानोमाथि यस्तो अन्याय हुन दिन्न ।”
सोधना पञ्चैतीबाट उठेर पहिले अलि पर गएर उभियो । हुलमुलमा उसमाथि कसैले शङ्का गरेन । ऊ विस्तारै पञ्चायत भवनको चौरबाट बाहिर निस्कियो । सोधना आफ्नो सुरक्षित स्थान खोज्दै ब्रह्मस्थानको ठुलो पिपलको बोटको छेउमा पुग्यो । उसले त्यहाँ पुगेर आफ्नो खल्तीबाट पुरानो मोबाइलको सेट झिकेर १०० नं.मा पुलिसलाई फोन गरी सबै कुरा सबिस्तार बताएर फेरि पञ्चायतकै हुलमा फर्कियो ।
धानोको कपाल चारपाटे मुडिसकिएको थियो । सोनफी पियनले एउटा सानो कचौरामा कालो रङ राखेर त्यसमा तोरीको तेल आफ्नो औँलाले मिलाउँदै गर्दा त्यहाँ पुलिसको भ्यान आइपुग्यो । पञ्चायत भवनको चौरमा धानोमाथि अन्याय गरिरहेका पञ्चहरूबिच भागदौड मच्चियो । मुकदर्शक भएका गाउँलेहरू पनि त्यहाँबाट भाग्नथाले । पुलिसहरूले सबैभन्दा पहिले भाग्दै गरेका प्रधानजी, झाँक्री र अरू नेताहरूलाई समाते । आदेश दिने झगरुलाई पनि हुलबाट भाग्न खोज्दा उसलाई सोधनाले छेको हाली समाएर पुलिसलाई बुझायो । अन्यायको रमिता परैबाट हेरिरहेका महिलाहरू पनि स्याँ स्याँ र फ्याँ फ्याँ गर्दै आआफ्ना घर लागे ।
त्यहाँ धानोको ज्यानको असुरक्षा देखेर पुलिसले पञ्चहरूसँगै धानोलाई पनि भ्यानमा राखेर सिधै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुर्‍याए । त्यहाँ सबै पञ्चहरूलाई पुलिसले थुने । डिएसपीको अगाडि रुँदै धानोले सबै कुरा छर्लङ्ग पारी । डिएसपी यो ज्ञान-विज्ञानको जमानामा पनि यस्तो सामाजिक अपराध कायमै छ भनेर अचम्ममा परे ! उनले जसरी भए पनि म न्याय दिलाउँछु भन्ने आश्वासन धानोको माइती पक्षलाई दिए । धानो जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सिधै आफ्नो माइतीको शरणमा पुगी ।
धानोको मुद्दा पञ्चहरूको विरुद्धमा जिल्ला अदालतमा दर्ता भयो । मुद्दा दर्ता भएपछि नाम चलेका वकिलको जमानतमा धरौटी राखेर सबै पञ्चहरू बिस्तारै बिस्तारै तारिकमा रिहा भए । मुद्दा जिल्ला अदालतबाट विभिन्न चरण पार गर्दै अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । ३४ वर्षको उमेरमा गरिब र कर्मनिष्ठ एकल महिला धानोमाथि बोक्सीको आरोप लगाइएको थियो । अहिले ६५ वर्षमा प्रवेश गरिसकेकी कर्मनिष्ठ धानो म निर्दोष छु र उचित न्याय पाउने छु भन्ने आशामा अदालतको न्यायको पर्खाइमा दैनिक मजदुरी गर्दै आफ्नो माइतीमा बसेकी छे । धानोले प्रण गरेकी छे कि जबसम्म म न्याय पाउँदिन तबसम्म म आफ्नो गाउँ फर्किन्न ।
आईसिसिलाई पत्र लेख्दा असन्तुष्ट पक्षधरले प्रयोग गरेको शब्दप्रती पत्रकार महासंघ जापानको आपत्ति
दुई हजार २३१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि, १९ जनाको मृत्यु
जुन ११ मा एनआरएनए जापान,कान्साई क्षेत्रिय समितिको ८औ अधिवेशन हुने